BADHEEDHAHAYGA DOORASHADA EE GOLAHA DEGAANKA EE BOORAMA – Abdilahi Dualeh
Posted byDualeh May 28, 2021 May 28, 2021 Posted inUncategorized
Dr. Ridwan waa aqoonyahan ku guulaystay hammiyo badan oo uu ka lahaa nolosha, gaar ahaan safarkiisii dheeraa ee waxbarashada. Wuxu ka mid noqday midhihii ugu horreeyey ee ay soo saartay jaamacadda Cammuud ee magaca wayn u yeeshay Boorama. Safarkiisa waxbarashana wuxu ku soo af meeray shahaadada PhD-da oo uu ka qaatay Jaamacadda “Cambridge University” ee Ingiriiska ku taalla. Waa jaamacad ka mida jaamacadaha dunida ugu horreeya tayo ahaan iyo magaca ahaanba.
Maantase Dr. Ridwan waxa ku dhashay hammi kale. Waa hammi ummadeed oo aanu kelidii ka midha-dhalin karin. Waa hammi u baahan taageerada qof kasta oo jecel Boorama. Waana musharrax gole-deegaaneedka Boorama. Waliba waa inu noqdo DUQA MAGAALADA BOORAMA. Ilaah ayaa wixii mustaqbalka dhici doona oge, fikir ahaanse aniga waxa ay ila tahay “Dr. Ridwaan waa qofkii ugu habboonaa ee abid ku hammiya inu noqdo duqa Borama”.
Haddaba waxan sawirtay Dr. Ridwaan oo noqda duqa magaalada Boorama. Waxa ii soo baxday taariikh mug wayn oo dadka reer Boorama u horseedayaan magaaladeena aan wada jecellahay. Waxa ii soo baxday in ay Borama noqonayso “magaaladii Soomaaliyeed ee ugu horraysay inta aan ogahay ee uu mayor ka noqdo shaqsi haysta PhD!” Runtii waa taariikh ay magaaladu horseed mar kale ugu noqon karto magaalooyinka Soomaalida oo dhan. Waana xujo qof kasta oo reer Borama ah hortaalla maalinta doorashada ee foodda inagu soo haysa.
Markaa, Boorama hiil ayay ka rabtaa cod-bixiyeheega jecel in ay magaaladu dhigto taariikhdaa cusub. Fadlan ku caawi magaaladu in ay hesho markii ugu horraysay qof magaalada baahiyeheega si cilmiyaysan ku waajihi kara. Ku caawi qof kasta oo heerkaa wax-barasho ka gaadhay inu hoggaanka magaalada u soo hanqal taago, si uu ugu adeego.
Taariikhaha magaalada Borama ay hore u dhigtay waxa ka mida:
1) Inay tahay magaaladii u horraysay ee Jaamacad laga furo taariikhda Somaliland. Taariikhdaasina waxay hirgashay markii Jaamacadda Cammuud laga furay 1998 kii.
2) Inay tahay magaaladii u horraysay ee iskaa wax u qabso ku dhista mid ka mida dugsiyada ugu qiimaha iyo qaayaha badan Somaliland. Waana markii bulshooyihnka Borama iyo hareereheegu ay si iskaa wax u qabso ah ku dhiseen dugsiga sare ee Sh. Cali Jawhar sannadihii hore ee 1970-nadii.
3) Waa magaaladii ugu horraysay ee laga hir-geliyo dugsi ay wax ku bartaan dadka baahiyaha gaarka ah leh (dadka maqalka la’ iyo kuwa aragga la’)
4) ….. iyo qaar kaloo badan oo laga yaabo in aad adigu hadda niyadda ku hayso ama xusi karto.
Haddaba waxa aan jeclaystay in aan kuugu baaqo in aad codkaaga kaga qayb qaadato hal qodob oo aan ku darno qodobbada taariikhiga ah ee Boorama:
(INAY NOQOTO MAGAALADII UGU HORRAYSAY EE SOOMAALIYEED EE YEELATA MAAYAR PhD HAYSTA).
Fursadda codaynta haddaan maanta haysan lahaa oo aan Borama joogi lahaa, waxaan codkayga u hibayn lahaa Dr. Ridwan, anigoo og in ina-adeerkay Maxamed Ismaaciil Habbane uu u sharraxanyahay isla golaha deegaanka ee Boorama! Sobobtuna waxa weeyi, Habbane waxan ku kaftami karaa markaan maqaaxiyaha Boorama shaah ka cabayo. Dr. Ridwana waxa aan kula kaftami karaa qof kasta oo Somali ah. Waxa kale oo kaga dhex kaftami karaa magaalooyinka dunida ugu waawayn ee Toronto ka mid tahay. Laakiin nasiib darro fursaddaa maanta ma haysto.
Ugu danbayn, waxaan rajaynayaa inu Alle idankii Dr. Ridwan noqdo duqa xiga ee Boorama, xarunta aqoonta ee Somaliland, si ay ay Boorama u hesho:
1) Maayar si dhab ah uga turjumi kara naanaysta Borama (Xarun aqooneed).
2) Maayar marka uu la fadhiyo madaxda kale ee dalka iyo ajaanibta kalaba aqoontiisa looga haybaysto.
3) Maayar aan lagula kaftami karin “Yesterday People😂😂”.
4) Maayar baahiyaha magaalada marka la bandhigayo u bandhigi kara si cilmiyaysan (sida aan kor ku xusay).
5) Maayar magaalada u dejin kara hiigsi fog oo maayarrada ka danbeeyaa ka dhaxlaan diiwaan-hawleed sannadaysan oo qoran.
6) Maayar muujiya in reer Boorama ku xushaan maamulkooda heerka aqooneed ee qofka.
F.G: Xisbiga qofku ka sharraxanyahay muhiim maantoo kale ma aha, siiba golaha deegaanka. Qofka ayaa la dooranayaa.
“Ilaahaybaa ku Sheegi!” Sheekada ninka isaga oo dhintay aarsaday, magtiisana la qaatay.